Isitudiyo esifanelekileyo - I-Airbnb
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguMegan
Iflethi okanye indlu ekwicomplex, yale mihla nehonjiswe kakuhle ephakathi elunxwemeni kunye neelinki zothutho. Uhambo olufutshane oluya kwiivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye neebhari.
Ibala elipholileyo elinemithi emikhulu kunye neendawo zokoja.
Indawo yokupaka ekhethiweyo kumanyathelo nje ayi- ukusuka kumnyango weyadi yakho.
Ukuzola nokuhlala kamnandi.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex, yale mihla nehonjiswe kakuhle.
Kufuphi nolwandle, kufutshane nomlambo, kufutshane neziko leevenkile zeClaremont kunye nesikhululo setreyini. Ibhasi ima ngaphandle kwesakhiwo ngesithuthi esiya eFremantle nasePerth City. Ilungiswe kakuhle ngaphakathi kwemithi emikhulu kunye nebala elisandul 'ukulungiswa eliquka inyama eyojiweyo kunye nendawo yokutyela phandle.
Isikhululo sikaloliwe esingaphantsi kwemizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo. Iindawo zokumisa iibhasi zingaphandle nje kwesakhiwo ezineendlela eziya eClaremont, eSubiaco nakwiSixeko nakwiFremantle ukuze kufikeleleke lula.
Umatshini wokuhlamba impahla okwigumbi lokuhlambela. Iindawo ezininzi (ezisetyenziswa ngumntu wonke) zokomisa kunye neerekhi onokuzisebenzisa kwibala labucala.
4.77 out of 5 stars from 385 reviews
4.77 · Izimvo eziyi-385
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi385
Kufuphi nokuya elunxwemeni okanye emlanjeni (kuxhomekeka kwindlela oya ngayo!), kufuphi neevenkile zekofu, iibhari neevenkile zokutyela.
Ngaphantsi kwemizuzu emihlanu xa uhamba ngeenyawo ukuya kwizikhululo zikaloliwe eziza kukusa ngqo esixekweni (nge-Subiaco, i-Leederville) kunye ne-Fremantle.
I-Claremont ikota ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo, iibhari ezininzi kunye neendawo zokutya onokukhetha kuzo.
Ndiza kuzama ukudibana nawe ndize ndikubonise iflethi okanye indlu ekwicomplex, kodwa ke, ndiza kukushiya unoxolo ngaphandle kokuba ufuna amacebiso okanye unemibuzo!. Ndisoloko ndinokuqhagamshelana nawe.